Oro Agri Europe - Sayenzi Inotungamirirwa Nezvakasikwa
Iyo Rovensa Kambani
Vedu Vanoshanda Vashandi
Fetiraiza / zvinovaka muviri
Kambani Inotungamira 2021
OROBAC ™ 100 FAQ Bhurocha
Potato Yekutongwa Mhedzisiro Gwara
Pome Zvibereko Kunyorera Gwaro
Mazambiringa Miedzo Yekutungamira Mhedzisiro
Zvirongwa zveR & D / Projetos deI & D.
OSB-OXIDE Detergent uye Biocide
Cleistothecia Kuongorora 2019
Cleistothecia Kuongorora 2018
Nhau / Dhinda
WETCIT ™ MIBVUNZO
OROMATE K26 ™ MIBVUNZO
Kwayedza Dhata Base
Basa redu nderekuramba tichiunza hunyanzvi uye nharaunda inochengetedzwa yezvirimwa uye mhinduro-inosimudzira mhinduro kumusika.
Mapurojekiti akapihwa mari neEU:
Kudyisa Nyika Kuburikidza neInnovation
Isu tinogadzira zvigadzirwa zvakachengeteka kune mushandisi uye nharaunda uye zvinopa inoshanda, asi yakasara yemahara mhinduro kune vatengi vedu.
Nemaitiro akasarudzika ezviito uye nzira dzekushandisa dzakatsetseka zvigadzirwa zvedu zvinoshandiswa zvinoenderana nematanho achangoburwa kuti anyatsoita basa, asi akachengeteka nharaunda. Kuti uzive zvakawanda, shanyira yedu FAQ chikamu.
Ona yedu FAQ Chikamu
Kuongororwa kwezvivakwa mukudonha kunyorera kwekuumbwa ine mafuta anokosha akatorwa kubva kucitrus sinensis kudzikisira erysiphe necator cleisthotecia budiriro
Ona Mapurojekiti Edu
NeR & D uye technical technical support zvikwata zvinogara muEurope uye kutenderera pasirese isu tinogara tichitsvaga zvigadzirwa zvitsva zvinogona kusimudzira goho nekusimbisa hutano hwezvirimwa.
Continuos R & D kudyara
Isu tiri vekutanga mupi wekuchengetedzeka, zvakatipoteredza, chengetedzo yezvirimwa uye mhinduro dzekuvandudza goho kumisika yepasi rose yezvekurima neyevatengi.
Oro Agri International Ltd (pasi pechiratidzo chedu ORO AGRI) inogadzira uye inogadzira zvigadzirwa zvepamutemo zvekurima, zvekumba uye zvekushandisa pasirese. Isu tinogadzira zvigadzirwa zvakachengeteka kumushandisi uye nharaunda uye izvo zvinopa inoshanda, asi mhinduro isina-yakasara kune vatengi vedu.
Gara uine nhau dzichangoburwa pamusoro pekambani yedu uye zvigadzirwa zvakachengeteka kumushandisi uye nharaunda uye zvinopa mhinduro inoshanda, asi yakasara yemahara kune vatengi vedu.
Isu tinogadzira zvigadzirwa zvakachengeteka kumushandisi uye nharaunda uye izvo zvinopa inoshanda, asi zvakasara mhinduro yemahara kune vatengi vedu. Zvigadzirwa zvigadzirwa zvinosanganisira vatsigiri, pesticides, ivhu zvinogadzirisa or foliar feeds.
Nyanzvi dzedu dzemumunda dzinoitisa zvidzidzo zvekubudirira mumunda nevarimi vemuno uye vanobatsira vanogovana nezvikamu zvekudzidzisa kudzidzisa nharaunda yekurima maererano nekushandiswa kweORO AGRI chigadzirwa mhando.
PREV-AM® yose-mu-imwe zvipembenene, fungicide uye acaricide
OROGANIC ™ Nhanganyaya
TRANSFORMER® Ivhu Inogadzirisa
WETCIT ™ Inobatsira
Inobatsira Tupukanana uye Mites Gwara
ORO AGRI Vanoshanda Vashandi
Kuita kudyidzana kwakakosha kwakakosha mukutigonesa kuwedzera mhinduro dzatinopa kuvarimi pasirese. Vedu vatinoshanda navo vanopa akasiyana akasiyana masevhisi anotibatsira isu kuramba tichiunza hunyanzvi mhinduro kumusika. Aya masevhisi anosanganisira certification, kudzidziswa, kutsvagisa, uye midhiya. Isu zvakare tine vatinoshanda navo vanobatirana mumaruwa uye kusimudzira munharaunda, zvinoshanda kuita kuti ruzivo nesainzi zviwanikwe kune vese Tiri kuramba tichiwedzera ruzivo rwedu rwekubatana uye tinogamuchira chero munhu anotibatsira kuona kuti zvigadzirwa zvedu zvinoshandiswa nemazvo uye nemazvo nevarimi, kuchengetedza zvirimwa zvavo uye nharaunda.
Mutungamiri wekutanga wekuchengetedza, zvakatipoteredza, kuchengetedza goho uye mhinduro dzekuvandudza kumisika yepasi rose yezvekurima neyevatengi.
Oro Agri International Ltd. Isu tinogadzira zvigadzirwa zvakachengeteka kumushandisi uye nharaunda uye izvo zvinopa inoshanda, asi zvakasara mhinduro yemahara kune vatengi vedu.
Ramba uchienderera mberi
Zvese zviri zviviri, kuwana kwedu musika uye chigadzirwa mhando chakawedzera uye izvozvi zviripo munyika makumi masere nemanomwe nyika pasirese.
ORO AGRI Boka rinogadzira pamakondinendi mana akasiyana nemafekitori muUSA, Brazil, South Africa uye ikozvino Portugal.
ORO AGRI Boka rine akati wandei patent tekinoroji. Tsvagurudzo yedu inogara yakanangana nekutsvaga mafomu matsva ehunyanzvi.
Sarudza kugovera mune dzinopfuura nyika 85 pasirese. Vanopfuura zviuru zviviri + vatengesi kana vatengesi vanotengesa zvigadzirwa zveORO AGRI pasirese. Vashandi zana nemakumi masere vari munzvimbo dzinopfuura makumi maviri nematatu.
R & D uye technical services ekutsigira zvikwata zvinogara muSouth Africa, Brazil, United States neEurope. Kugadzira uye Kuvandudza marabhoritari muPortugal, Brazil, South Africa, uye United States
Isu tinogadzira uye tinogadzira zvigadzirwa zvepamutemo, uye isu tinogadzira zvigadzirwa zvakachengeteka kune mushandisi uye nharaunda uye tinopa inoshanda, asi yakasara yemahara mhinduro kune vatengi vedu.
Sayenzi Inotungamirirwa Nezvakasikwa®
Global BioControl Musangano 2021
Kuzivisa OROBAC ™ 100
Nyowani nyowani / mvumo
OROMATE K26® inobvumidzwa muFrance neANSES
Copyright 2021 © ORO AGRI Europe. Kodzero Dzese dzakachengetedzwa.
Isu tinoshandisa makuki kukupa iwe zviri nani kubhurawuza ruzivo, kuongorora saiti traffic, uye kugadzirisa zvemukati zvemukati. Verenga nezve mashandisiro atinoita makuki uye nemabatiro aungaite kudzora nekudzvanya "Zvaunofarira Zvakavanzika." Ukaramba uchishandisa ino saiti, unobvuma kushandisa kwedu makuki.
Analytics uye Customization Cookies
Ndinokutendai nekushanyira iyo ORO AGRI webhusaiti uye kuongorora kwedu zvakavanzika mutemo. Yedu yekuvanzika mutemo iri nyore: isu hatitore chero ruzivo rwemunhu nezve iwe kana iwe ukashanyira webhusaiti yedu kunze kwe IP kero iwe yaunonamira kubva kuitira kuti ikuendese iwe kunzvimbo yakatarwa saiti yezvigadzirwa zvedu. Izvi zvinoitirwa kuti zvive nyore kwauri. HERE NDEZVATINOGONA KUTAURA Ruzivo NEZVENYAYA YAKO KUSVIRA KWETU WEBhusaiti: Ruzivo Rwakaunganidzwa uye Ruchengetedzwa Rwoga iyo ORO AGRI webhu sevha haina kungoerekana yaunganidza kana kuchengetedza chero default ruzivo kune chero http chikumbiro chakagamuchirwa. Isu tinoita zvakadaro tinoziva IP kero yako kudzosera midzi mushandisi weimwe nzvimbo yekutonga kune yakakodzera nyika peji rewebhu. E-Mail E-mail inotumirwa kuOORO AGRI inogamuchirwa pa-mu-bhokisi email account yakabatana neinfo@oroagri.com kana legal@oroagri.com asi haina kuchengetwa pawebhu webhu zvachose. Kushandiswa kwePresistent Cookies neTekinoroji yeTekinoroji Hatishandisi macokie anoramba aripo kana matekinoroji anoteedzera ekuteedzera, senge iwo anoshandiswa pakurongedza vashanyi vanodzoka, pane webhusaiti yedu. Kana musangano wako wapera, iyo kuki inoguma. Kana iwe uine chero mibvunzo kana zvinonetsa, ndapota taura nesu kune yedu e-mail kero legal@oroagri.com
Aya makuki akanyatso kudikanwa kuti akupe masevhisi anowanikwa kuburikidza nemawebhusaiti edu uye kushandisa zvimwe zvacho, sekuwana nzvimbo dzakachengeteka. Nekuti makuki aya anonyanya kudikanwa kuti aunze mawebhusaiti, haugone kuaramba pasina kukanganisa mashandisiro edu mawebhusaiti. Unogona kuvabvisa kana kudzima nekuchinja bhurawuza rako marongero, sezvakatsanangurwa pasi pemusoro unoti "Ndingadzora sei makuki?" muKuki Statement.
gdpr [anotenderwa_maokie], gdpr [mvumo_mhando], wc_cart_hash_ #, wc_fragment_
Aya makuki anounganidza ruzivo runoshandiswa chero mune yehuwandu fomu kutibatsira kuti tinzwisise mashandisiro edu mawebhusaiti kana kutibatsira isu kugadzirisa edu mawebhusaiti iwe kuitira kuti uwedzere ruzivo rwako.
_ga, _gat, _gid, unganidza
Iyi cookie inoshandiswa kutumira data kuGoogle Analytics nezve chishandiso chemushanyi uye maitiro. Iyo inoteedzera mushanyi pane ese madhijitari uye nzira dzekutengesa. Iyi cookie inoshandiswa kugadzira mameseji ekushambadzira ave akakodzera kwauri uye zvaunofarira. Inoitawo mabasa sekudzivirira kushambadza kumwe chete kuti kuenderere mberi kuonekazve, kuve nechokwadi kuti kushambadza kunoratidzwa nemazvo, uye mune dzimwe nguva kusarudza kushambadza kunoenderana nezvaunoda.
r / unganidza